Purba Sandesh	२३ आश्विन २०७८, शनिबार	29 Views
=============आज यो चाडपर्वकै बेला ब्यापारीले मौकामा चौका हान्दैछन् । आम उपभोक्तालाई यस विषयमा कुनै चासो छैन । जब हाम्रा चाडपर्व भित्रिन्छन् , नजिकिन्छन्, बजारमा खाद्यान्नको भाउ उकालो चढ्छ । किन चढ्यो, कसले चढाउँदैछ भन्ने अन्वेषण हामी उपभोक्तामा छैन । बजार गयो रकम ति¥यो अनि काम चलायो । प्रत्येक वर्षझंै यो वर्ष पनि खाद्यान्नको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले निरन्तरता पाइरहेको छ , यतिबेला दशंै र तिहार मनाउन स्वदेश या विदेशबाट नेपालीहरु हुलका हुल आइरहेका छन् । चाडबाडका बेला माग बढ्ने भएकाले ब्यवसायीले मूल्यवृद्धि रोक्न बजार अनुगमन गरिरहेको छ, तर कतैपनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमननै छैन । लुकीछिपी ब्यापारीले सामान बेचेकै छन् । ==============
हामीलाई केही थाहा हुन्न हिजोआज । आ–आफ्नै धुनमा ब्यस्त छौं, सबै मानिसलाई एउटा न एउटा कामले गाँजेको छ । यो दुनियाँमा काम नभएको मानिस कोही छैन । यदि छन् भने शिक्षित, बेरोजगार युवा र युवतीहरु मात्रै छन् ्र उनीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक संघ, संगठनको भ्रातृ संगठनमा बसेर काम गर्दागर्दै समयले नेटो काटेकै थाहा हुन्न, यसलाई एउटा बिडम्बनाकै रूपमा लिन सकिन्छ । हामी सचेत र सजग नेपालीको चेतनाले यो पनि बुझ्न सकेन कि देशमा के भइरहेको छ ? खाद्यपदार्थ , पेय पदार्थमा मूल्य कति आकाशियो भन्ने कुरा सम्म आजका युवाहरूले थाहा पाएकै छैनन् ्र दलहरुले आफ्नै लबेदा समाएर अघि या पछि कति हिंडाइराछन्, सित्तैमा त्यो पनि थाहा नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ , हो आज यही भइरहेको छ, मौकामा चौका हान्ने ब्यापारी र बिचौलियाले दिन प्रतिदिन खाद्यपदार्थ लगायतका सामाग्रीहरुमा मनोमानी ढंगले चर्को मूल्यमा भाउ वृद्धि गरिरहेका छन् ।
तापनि उपभोक्ता अधिकार मञ्च र बजार अनुगमन समिति गुमनाम छ । आज प्रत्येक खाद्य सामाग्रीमा आ.व. २०७७ असोज र २०७८ असोजमा झन्डै एक तिहाई जति मूल्य मनोमानी तरिकाले बढाइरहेका छन् । जस्तै भुटेको तोरीको तेल हिजो २७५ थियोे भने आज बढेर ३४०÷३६० पुगेको छ ्र काँचो तोरीको तेल १८० बाट ३६० , भट्मास तेल १५५ बाट २४०, सनफ्लावर तेल १६५ बाट २५० । यसरी प्रत्येक खाद्य पदार्थमा दिनदिनै मूल्य बढीरहँदा नि हामी मौन छौ किन ? किन बोल्दैनौ ? किन सरकारलाई दोष दिन्छौं ? यो दोष सरकारको होइन, स्वयम् हामी उपभोक्ताहरुको हो, होकि हैन छातीमा हात राखेर बोल्नुस् । सबैभन्दा ठूलो दोषीनै तपाईं हामी हौ , होकि हैन भन्नुस त ? नेपालको संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने प्रबन्ध छ । त्यसैगरी आपूर्ति नीति , २०६९ ले उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अवरोधबिनै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा पर्याप्त, सहज, सुलभ र गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नीतिगत सुधार कार्यलाई अगाडि बढाउन आधार प्रदान गरेपनि अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही अनुसारकै उपभोक्ता समिति धेरै बनिसकेको छ तर व्यापक रूपमा अनुगमन तथा नियमन भने कहीँकतै देखिन्न ।
आज यो चाडपर्वकै बेला ब्यापारीले मौकामा चौका हान्दैछन् ्र आम उपभोक्तालाई यस विषयमा कुनै चासो छैन । जब हाम्रा चाडपर्व भित्रिन्छन् , नजिकिन्छन्, बजारमा खाद्यान्नको भाउ उकालो चढ्छ । किन चढ्यो, कसले चढाउँदैछ भन्ने अन्वेषण हामी उपभोक्तामा छैन । बजार गयो रकम ति¥यो अनि काम चलायो । प्रत्येक वर्षझंै यो वर्ष पनि खाद्यान्नको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले निरन्तरता पाइरहेको छ , यतिबेला दशंै र तिहार मनाउन स्वदेश या विदेशबाट नेपालीहरु हुलका हुल आइरहेका छन् ्र चाडबाडका बेला माग बढ्ने भएकाले ब्यवसायीले मूल्यवृद्धि रोक्न बजार अनुगमन गरिरहेको छ, तर कतैपनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमननै छैन । लुकीछिपी ब्यापारीले सामान बेचेकै छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर विभागलगायत नियामक निकायले संयुक्त अनुगमन गरिरहेको भनिरहेको छ,्र तर कहाँ, कता गरिरहेको छ त्यो पनि थाहा छैन । कतै पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार भाउमा भने परेकै छैन ्र भन्नेले जेजे भनुन्, गरुन् काम भने कुन पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ्र मूल्य नियन्त्रण भएको देखिन्न । यसबाट बजार अनुगमन केवल देखावटी कर्ममात्र भइरहेको देखिन्छ । प्रचार भने सम्बन्धित सरोकारवालाको अलि बढीनै छ । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने खानेतेलको मूल्य एक वर्षमै प्रतिलिटर एकसय रुपैयाँ बढ्या छ । लु अब भन्नुस् त किन यसरी बढ्यो, के कारणले बढ्यो ? यो त सोझै थाहा पाइन्छ कि प्रभावकारी अनुगमन नभएरै ,यो शाश्वत सत्य हो । गेडागुडी, चामल, चिउरासहित अन्य खाद्यान्नको मूल्य पनि अचाक्ली आकाशिएको छ । यसरी मूल्य निरन्तर बढिरहँदा बजार प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठन थालेको छ । उत्पादक ,आयातकर्तादेखि खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा जति तहमा किनबेच हुन्छ , यसलेपनि महङ्गी बढाउने काम गरेको देखिन्छ ्र वाणिज्य विभागलेनै तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उत्पादकदेखि उपभोक्ता सम्म आइपुग्दा ५ देखि ६ तहसम्म पार गर्नुपर्छ ,जसले बजारभाउ बढाउन सघाइरहेका छन् ्र खाद्यान्नको मूल्य बर्सेनि बढिरहनुमा बजार प्रणाली नमिल्नु पनि यसको अर्को कारण हो ्र तसर्थ बजारभाउ बढ्नुको अन्य कारण पत्ता लगाउने तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो, यसतर्फ उसलाई ध्यानै छैन ्र यो बेलामा मन्त्री नियुक्ति गर्नै हम्मेहम्मे छ ्र जनता महङ्गीको मारमा छन् ्र कसरी चाडवाड मान्ने के गरेर टार्ने भन्ने कुरामा सोचमग्न छन् ्र यो बेलामा त जनतालाई पूर्ण रूपमा शान्ति, सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो पनि दिन सकेको छैन ्र जताततै जतासुकै बिचौलियाको बिगबिगी बढ्दो छ, सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष मौन बसेका छन् ्र हिजो सत्ता चलाउँदा माक्खो नमार्नेहरु आज विरोध र अवरोध गर्न आतुर छन् ्र महान नेपाली जनता चिन्तित छन् ्र अर्कोतिर कोभिडको दोश्रो भेरिएण्टले ग्रस्त छन् ्र अनि यही बेलामा प्रत्येक खाद्यपदार्थको मूल्य आकाशिँदा अनि किन आक्रोश व्यक्त गर्दैनन् त ? यतिबेला सबैभन्दा भाउ बढेको वस्तु मध्ये एक खानेतेलमा मुलुक पूर्णत परनिर्भर हुनुपरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएकाले यहाँपनि मूल्य बढेको नेपाल बनस्पति घिउतेल उत्पादक संघका पदाधिकारी बताइरहेका छन् । यहाँका उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ– क्रुड सोयाबिन तेल, क्रुड सनफ्लावर तेल, तोरीको दाना ब्राजिल , अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युक्रेन लगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । नेपालमा सम्भव भएन ्र तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको अनुपात र यहाँ भएको मूल्य वृद्धिको तुलनात्मक विश्लेषण राम्रोसंग गर्ने गरिएको छैन । ब्यवसायीको आयात प्रज्ञापनपत्र, लागत खर्च, मुनाफा र बजार मूल्य बारे पनि सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्नु जरुरी छ ्र बजारमा विभिन्न तहहुँदै उपभोक्ता सम्म खाद्यान्न आइपुग्दासम्म मूल्य अत्याधिक बढेको छ । खाद्य संस्थानले कम्पनीबाट सीधै तेल किनेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा भने बजारभाउ भन्दा सस्तो देखिएको छ । यसैले पनि मूल्यवृद्धि कम गर्न अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ्र उपभोक्ता ठगिइरहने अवस्था हुनुहुन्न । तसर्थ मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पहलकदमी थाल्न सरकार पछि हटनुहुन्न । यसमा राजनीतिक तहबाटै अग्रसरता लिनुपर्छ ्र चाडपर्वमा दैनन्दिन देखिएको कालोबजारी बन्द हुनुपर्छ । कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्ष एकजुट हुनुपर्छ ।